မဟာယာနနှင့်ထေရ၀ါဒကွာခြားချက်များ။ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Buddhism » မဟာယာနနှင့်ထေရ၀ါဒကွာခြားချက်များ။
Posted by Visesa on Nov 24, 2010 in Buddhism, Cultures, Education, History, Myanma News | 26 comments
ထေရ၀ါဒ နှင့် မဟာယာန ကွာခြားချက်များ by အရှင်သုနန္ဒာလင်္ကာရ M A ( ပန်းကမ္ဘာ )
အချိန်အထိ ၀ိကာလဘောဇန လုပ်နိုင်တယ်၊ သေနု(အရက်ခပ် ပျော့ပျော့ ယခုခေတ် ထန်းရည်လိုမျိုး )ကို သောက်နိုင်တယ်၊ ရွှေငွေများကို လူတွေလို စိတ်ကြိုက် ကိုင်တွယ်အသုံးပြုနိုင်တယ် — စသဖြင့် တောင်းဆိုခဲ့ပြီး ထေရ၀ါဒဗုဒ္ဓသာသနာတော်အား ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးလုပ်လာသဖြင့် ထိုရန်သူတို့အား ကာကွယ်ရန် ဒုတိယအကြိမ် သင်္ဂါယနာတင်ရပြန်သည်။
အိမ်ထောင်ရှိကြတယ်၊ အရက်သောက်ကြတယ်၊ ပါတီ နိုက်ကလပ်တက်ကြတယ် လို့ တဆင့်စကား ကြားဖူးပါတယ်၊ တရုတ်၊ တိဗက် ဟောင်ကောင် ထိုင်ဝမ် စတဲ့ နိုင်ငံတွေမှာ ရှိတဲ့ မဟာယာနဘုန်းကြီး တွေကတော့ အိမ်ထောင်ပြုတယ် လို့ မကြားမိပါဘူး၊ ဒါကြောင့် သူတို့ကတော့ နည်းနည်း သန့်ရှင်းသေးတယ် လို့ ယူဆ၇မှာပါ။ သက်သက်လွတ်ဝါဒကတော့ တော်တော် ကြီးစိုးနေဆဲပါပဲ၊ ဒါကလဲ ဘုရားရှင်လက်ထက်တော်အခါကတည်းက အရှင်ဒေ၀ဒတ်က တောင်းဆု ငါးပါးထဲမှာ ရဟန်းတော်များသက်သက်လွတ် စားဖို့ သိက္ခာပုဒ်ပညတ်တော်မူပါဘုရား – ဆိုပြီး တောင်းပန်ခဲ့ဖူးပေမယ့် ဘုရားရှင်က ခွင့်မပြုခဲ့ဘူး။
အရင်းစစ်တော့ အမြစ်မြေက – ဆိုသလို မြောက်ပိုင်း ဗုဒ္ဓဘာသာခေါ် မဟာယာန၀ါဒ ဟာလဲ ဒုတိယသင်္ဂါယနာ တင်ချိန် ကတည်းက အဓမ္မ၀ါဒက နေ ဆင်းသက်လာတာမို့ အယူဝါဒတော်တော်များများ လွဲနေတာ မထူးဆန်းတော့ပါဘူး။
မဟာယာန အယူဝါဒမှာ – အရဟတ္တဖိုလ်ရပြီးသား ရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ဟာ ဒီဘ၀ကနေ နိဗ္ဗာန်ကို မျက်မှောက်ပြုလို့ မရသေးဘူး။ ရဟန္တာအဖြစ်ကနေ အနာဂမ် ၊ သကဒါဂမ် ၊ သောတာပန် အထိ ပြန် လျှောကျသွားတယ်။ ပုထုဇဉ်ပြန်ဖြစ်သွားရမယ် ။ ပြီးမှ ဘုရားဆုပန်ပြီး ဘုရားဖြစ်ဖို့ ပြန်ကြိုးစားကြရမယ်။
ထေရ၀ါဒ မှာတော့ မဟုတ်ဘူး – ပုထုဇဉ်ဘ၀ကနေ သောတာပန်၊ သကဒါဂါမ်၊ အနာဂါမ်၊ ရဟန္တာ အစဉ်အတိုင်းဖြစ်ပြီးရင် နိဗ္ဗာန်ကို မျက်မှောက်ပြုရတာပါပဲ၊ နောက်ဆုံးဘ၀ပေါ့၊ သူ့အတွက် ဒီဘ၀ ဒီခန္ဓာကိုယ်ဟာ နောက်ဆုံးပါပဲ၊ ဘုရားဟောထားတဲ့ စကားလေးတခွန်းရှိတယ်၊ ရဟန္တာဖြစ်တဲ့သူ များလဲ ပြောလေ့ရှိကြတယ်၊ အထူးသဖြင့် ဘုရားရှင်ကိုယ်တိုင်ပါ။
မဟာယာနမှာတော့ ကိုယ်မကြိုက်တာတွေကို ပယ်လိုက်၊ ထုတ်လိုက် ပြန်ထည့်လိုက်၊ အသစ်ထပ်တိုးလိုက်နဲ့ ခေတ်အ ဆက်ဆက် ဖြတ်သန်းခဲ့တာမို့ ဘယ်တရားက ဘုရားဟော တရား အစစ်အမှန်လဲ ဆိုတာ တိတိကျကျ ပြောနိုင်ဖို့ ခက်ခဲတဲ့ အခြေအနေကို ရောက်နေပါပြီ။ စစ်မှန်သော တရားတော်တို့ သည် မိမိတို့ လက်ထဲမှာသာ ရှိနေသေးသောကြောင့် အကျိုးရှိရှိ အသုံးချနိုင်ကြပါစေ ဟုသာ တိုက်တွန်းစကားဆိုရင်း နိဂုံး ချုပ်ပါရစေ —
Theravada and mahayana buddhism differences (ထေရ၀ါဒ နှင့် မဟာယာန ကွာခြားချက်များ) by Ashin Sunandalankara (အရှင်သုနန္ဒာလင်္ကာရ M A ( ပန်းကမ္ဘာ ))
၂။တရားနည်းလမ်းကျသော အဖြေလေးတစ်ခု။adefinite & true answer
အဘယ့်ကြောင့် ဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံအများစု သည် ဆင်းရဲ နေကြပါသနည်း။
ဗုဒ္ဓဘာသာမှ အဆုံးအမတော်များအနက်တစ်ခုမှာ ပြည့်စုံကြွယ်ဝမှု သည် အစစ်အမှန်ချမ်းသာ
မဟုတ်ပေ။ထို့ အပြင် ပြည့်စုံကြွယ်ဝမှုသည် အမြဲရှိသောအရာလည်း မဟုတ်ချေ။နိုင်ငံတိုင်း
တွင်ရှိသော လူသားအားလုံးတို့ သည်လူနေမှုဘ၀ ပြည့်စုံသည် ဖြစ်စေ၊ နိမ့်ကျချို့ တဲ့သည်
ဖြစ်စေ၊ခန္ဓာကိုယ်ဆင်းရဲပင်ပမ်းမှုကို ခံစားနေကြရသည်သာဖြစ်သည်။သို့ သော် ဗုဒ္ဓ အဆုံး
အမတော်များကို သိတတ်နားလည်သောပုဂ္ဂိုလ်တို့ သည် ချမ်းသာစစ်ချမ်းသာမှန်ကို တွေ့ ရှိ
Comment ရေးရရင်ရှည်နေမှာကြောင့် မှတ်ထားတာလေးတွေကိုတစ်ဆင့်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
ဒီစာကို မျှော်နေတာ အမှန်ပါ။ တင်ပေးတဲ့ အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဆင်းရဲတာ အတိတ်ကံ မကောင်း ကြိုးစားအားထုတ်မှု ညံ အတိတ်ကလည်း စိတ်စေတနာ နည်းခဲ့ သလို ယခုဘ၀မှာလည်း စိတ်စေတနာ မပြည့်ဝလို့ ဆင်းရဲနေတာ ထေရ၀ါဒ ကြောင့် ဆင်းရဲပါတယ်လို့ အပြစ်တင်နေတဲ့ လူသားတွေ အတွက် ဖြေဆေး ရှာချင်နေတာပါ။
ဆင်းရဲခြင်း အကြောင်းကတော့ အတိတ်က စိတ်စေတနာ နည်းလို့ ဆင်းရဲတဲ့ လူမှု အသိုင်းအ၀ိုင်းမှာ လူလာဖြစ်ရတာ.. ဆင်းရဲတာတောင်မှ နားမလည်ဘဲ.. ထပ်ပြီး စိတ်ကောင်း မမွေးနိုင်တော့.. မွဲပြီးရင်း မွဲ.. ဖြစ်နေတာ မမြင်နိုင်ဘဲ.. ဟိုဟာ လေး ပြောင်း လုပ်ရင်ကောင်း နိုး ဒီဟာလေး ပြောင်း လုပ်ရင် ကောင်း နိး နဲ့.. ခြံစည်းရိုး ခွထိုင်ပြီး ဟိုဘက်ခြံ ခြေထောက်ချ ဒီဘက်ခြံ ခြေထောက်ချ.. နောက်ဆုံးတောင့် သံချွှန်ပေါ် အချိန်ကြာကြာ ထိုင်မိလို့ ဒဏ်ရာ တခုပိုတာဘဲ ရှိတယ်။ အားလုံးကတော့ ကိုယ်ယုံကြည်ရာ ကိုယ်လုပ်နိုင်တယ်။ ခံယူချက်မရှိဘဲ ယောင်ဝါးဝါးကတော့ ယောင်ဝါးဝါးနဲ့ ဇတ်သိမ်းမှာဘဲ။ မယုံရင် စောင့်ကြည့် သေမှ သိ။
စစ်မှန်သော တရားတော်တို့ သည် မိမိတို့ လက်ထဲမှာသာ ရှိနေသေးသောကြောင့် အကျိုးရှိရှိ အသုံးချနိုင်ကြပါစေ <<< အရှင်ဘုရား ပြောတဲ့ အတိုင်း ကျင့်ကြံ အားထုတ်ပါ့မယ်။
စာဖတ်အားနည်းလို့ မရှာနိုင်သေးခင် အရှင်ဘုရား ရှာထုတ်ပေးတဲ့ အတွက် အထူး ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
အာရှတိုက်ဒေသအတွင်း နေရာဒေသနီးစပ်တာမို့ ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့့တစ်ခြားဘာသာများသမိုင်းကြောင်း၊အယူအဆ၊အတွေးအခေါ်တွေရောထွေးနီးစပ်မှုတွေရှိနိုင်ပါတယ်။အနှစ်သာရဖြစ်တဲ့“သီလ၊သမာဓိ၊ပညာ ”အဆုံးအမကျင့်စဉ်တွေအဆင့်ဆင့်ကိုသာိုကြိုးစားအားထုတ်ကြရင်“အစစ်အမှန်ချမ်းသာ”ကိုလူသားတိုင်းရနိုင်ရောက်နိုင်ကြမှာပါ-လို့ ဆိုပါရစေ။
ကျန်းမာ ချမ်းသာ အသက်ရှည် တရားရ တွင်းပနှစ်ဖြာ ခန္ဓာအကျိုး သယ်ပိုးရွက်ဆောင်နိုင်ကြပါစေ။
ထေ၇၀ါဒဟာအကျိုးနဲ့အကြောင်းပေါ်မှာအခြေခံပါတယ်။ ဟောသမျှတ၇ားအားလုံးကိုသစ္စာ(၄)ပါးနဲ့ချုပ်ပါတယ်။ အတိတ်ကကိုယ်ပြုခဲ့တဲ့ကံကိုအဲ့ဒီဘ၀မချုပ်ခင် (သို့)ချုပ်ပြီးနောက်မှပြန်အကျိုးခံစား၇ပါတယ်။ ဗုဒ္ဓကဟောလို့ဖြစ်ပျက်၇တာမဟုတ်။ လောက၇ဲ့ဖြစ်ပျက်တတ်တဲ့သဘောကိုဗုဒ္ဓကညွှန်ပြတာပါ။ ထေ၇၀ါဒလို့အမည်တွင်ပြီးတောင်ပိုင်းဟိနယနလို့မည်တဲ့အယူဟာဂေါတမ၇ဲ့တိုက်၇ိုက်နွယ်ဆင်းသက်လာတဲ့မူ၇င်းတ၇ားဖြစ်ပါတယ်။ ဘာသာဆိုတာထက်အကျင့်အကြံလို့ဆိုပါ၇စေ။ မဟာယနဘာသာဟာအကျိုးနဲ့အကြောင်းကိုအဓိပ္ပါယ်ဖွင့်၇ာမှာကွဲပြားတဲ့အချက်တွေ၇ှိပါတယ်။ ဂေါတမဗုဒ္ဓဟာလူသေလူဖြစ်ဝါဒ၊လူဝင်စားဝါဒတွေကိုအပြီးတိုင်ဖျက်သိမ်းပါတယ်။ လောကမှာထင်၇ှား၇ှိသမျှအနတ္တလို့ဆိုပါတယ်။ အတ္တကိုအပြီးတိုင်ပယ်၇ပါတယ်။ လုပ်ယူလို့၇တဲ့အကျိုးကိုမဟောပါဘူး။ ကံ၇ဲ့စီမံ၇ာ(ကိုယ်လုပ်ခဲ့တဲ့)ကိုညွှန်ပြပါတယ်။ သောတာပန်နဲ့သဂဓါဂါန်ပြီး၇င်အနာဂါန်ဘ၀ေ၇ာက်တာနဲ့လူ့ဘ၀၇ဲ့စက်ဆုတ်မှုကိုမျက်ဝါးထင်ထင်မြင်ပြီး၊ လူဝတ်ကြောင်ဘ၀ကိုစွန့်ကြ၇ပါတယ်။ လူနဲ့လဲနီးနီးနေလို့မ၇တော့ပါဘူး။ ကိလေသာတွေလဲပြတ်ဖို့ပိုလမ်းနီးလာပါတယ်။ နိဗ္ဗာန်ကိုနောက်ဆုံးမျက်မှောက်ပြု၇တဲ့ဘ၀မှာ။ သံသ၇ာမှာလည်စ၇ာအကြောင်းမ၇ှိတော့တာမို့နောက်ဆုံးဘ၀ပါ။ နိဗ္ဗာန်လို့ခေါ်တဲ့ “မ၇ှိခြင်း”ကိုေ၇ာက်သွားပါတယ်။ ဘာမ၇ှိတာလဲဆိုတော့-၇ုပ်/နာမ်နဲ့တကွသံသ၇ာမှာလည်စေခြင်းကိုဖြစ်စေတတ်သောအကြောင်းတ၇ားတွေအားလုံးမဲ့တဲ့အ၇ာတွေကိုဆိုလိုတာပါ။ ဒါကြောင်းဗုဒ္ဓ၀ါဒနဲ့ကျင့်စဉ်တို့သည်သိပ္ပံနည်းအကျဆုံးသောဝိဇ္ဇာပညာဆို၇င်မမှားကြောင်းပါခင်ဗျား…။
ရေကြောင့်ဖြစ်တဲ့ ရွံ့ညွန်ကို ရေနဲ့သာ ဆေးကြောရသလိုဘဲ..
စိတ်ကြောင့် ဖြစ်တဲ့ အညစ်အကြေးကို စိတ်နဲ့သာ ကြည့်လင်အောင် ဆေးကြောရပါတယ်။
အကောင်းမြင်စိတ်မရှိရင် ဘယ်တော့မှ အကောင်းဖြစ်လာမှာ မဟုတ်တဲ့ အတွက် ရုပ်ဘယ်လောက် ချမ်းသာသာ.. စိတ်က ချမ်းသာချင်မှ ချမ်းသာမယ်။ သာသနာမှာ ရှိနေပြီး သာသနာ ကို မလေ့လာဘဲ ကောင်းနိုးနိးနဲ့ လျောက်ရှာနေရင်တော့ ငါးပွက်ရာ ငါးမျှားသလိုဘဲ.. ဖြစ်လိမ့်မယ်။ ရေပွက်ပမာ ခဏတာ ဖြစ်ကြရတဲ့ ဘ၀မှာ တံလျက်ကိုရေထင် ရွှေသမင် အလိုက်မှားတဲ့ ဘ၀တွေက ရုန်းထွက်နိုင်ကြပါစေ။
ရှာတွေ့ လာတဲ့link နဲ့ စာအုပ်ကလေးကိုပို့ ပေးလိုက်ပါတယ်။ဆက်လက်လေ့လာနိုင်ပါစေ။
•	Buddha and BodhisattvaaHindu View
မဟာယာနလို မတူတဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာဂိုဏ်းတွေကို ယုံကြည်သက်ဝင်သူတွေရဲ့ ကိုယ်တိုင်ဖြေရှင်းချက်တွေကို ဖတ်ရရင် သိပ်ကောင်းမယ်လို့ ထင်မိပါတယ်။ အခုချိန်ထိ ဖတ်ဖူးတာ ကိုယ့်ဖက်ကသူတို့ကို ပြောနေတာပဲ ရှိသေးတယ်။ မန်းလေးဂေဇက် ပုံနှိပ်သတင်းစာမှာတော့ ပစ္စုပ္ပန်ကမ္မဝါဒဆိုတာ ဖတ်ဖူးပါရဲ့။ အဲဒါကို ထေရဝါဒမဆန်လို့ ဒီဖက်က စွတ်စွဲတာလဲ ကြားမိပါရဲ့။ တကယ်တော့ ဘုရားဟောခဲ့တာကို အပြည့်နားလည်ဖို့ဆိုတာ အဓိသီလ၊ အဓိသမာဓိ၊ အဓိပညာ သုံးပါးစလုံးပြည့်စုံမှ ရမယ်ထင်ပါသည်။ တခုခုက ချို့ယွင်းအားနည်းနေရင်တော့ အစွန်းတဖက်ဖက်ကို ရောက်သွားနိုင်တယ်လို့ ထင်မြင်မိပါသည်။
မဟာယာန ဘုန်းတော်ကြီးတွေ ဟောပြောပို့ ချတာကို နားထောင်လေ့လာကြည့်ကြစေချင်ကြောင်းပါ..။ ကျုပ်တော့ မြန်မာလိုရေးတတ်တဲ့.. မဟာယာနဘုန်းတော်ကြီးတပါးပါး.. တွေ့မလားရှာနေပါတယ်..။ သိတဲ့သူတွေလည်း ပင့်ဖိတ်ပေးပါဦး..။ အတွေးအခေါ် ..ကိုးကွယ်မှုတွေကို ဘောင်မခပ်ထားကြစေလိုပါ။ … အာကာသကောင်းကင်ကျယ်လို ..အဆုံးမရှိ..(နှလုံးသားနဲ့ဦးနှောက်ကို )ဖွင့်လို့ထားကြစေချင်ပါတယ်…။
ဆိုတဲ့.. အပေါ်မှာရေးထားတဲ့..စာ-စကားကိုတော့ .. အစွန်းရောက်နေတယ်ထင်မိပါတယ်..။ ဒါဟာ.. ထေရ၀ါဒ ဖက်ကအမြင်သီးသန့်ပဲဖြစ်နိုင်ပါမယ်..။
ဂေါတမမြတ်စွာဘုရား မွေးရက်နဲ့ ပရိနိဗ္ဗာန်ပြုခဲ့တဲ့ ..နှစ်လရက်တောင် အထောက်အထားအတိအကျ မပြနိုင်တဲ့ ..သမိုင်းမှာ .. ထေရ၀ါဒကသာ တ၇ားအစစ်အမှန်တွေပါလို့ ကောက်ချက်ဆွဲဖို့အင်မတန်ခက်ပါတယ်.။
ဒါကြောင့် …ကေသမုတ္တိသုတ် (ခေါ်) ကာလာမသုတ်-နဲ့ပဲ..ဆွေးနွေးတာလေးခဏရပ်လိုက်ပါရစေ..။
ကေသမုတ္တိသုတ် (ခေါ်) ကာလာမသုတ်-
The time of his birth and death are uncertain: most early 20th-century historians dated his lifetime as c. 563 BCE to 483 BCE, but more recent opinion dates his death to between to between 486 and 483 BCE or, according to some, between 411 and 400 BCE.
အင်အိုင်ချောင်းမြောင်း မြစ်မင်းပင်လယ် ရေဟူသမျှသည် နေကြောင့်အငွေ့ပျံကုန်၏။
ကောင်းကင်ထက်ဝယ် မိုးတိမ်အဖြစ်ဖွဲ့တည်ရာမှာ နောင်တွင် မိုးအဖြစ်ပြန်လည်ရွာသွန်းလေးဋ္ဌ။
သို့သော်၎င်းသန့်စင်သောမိုးရေစက်တို့သည် ညစ်ညမ်းသောလေထု ကိုသော်၎င်း၊
မသန့်ရှင်းသောမြေပြင်ကို၎င်းဖြတ်သန်း၍သော်၎င်း မူလလာရာအင်းအိုင်ချောင်းမြောင်းမြစ်ပြင်ပင်လယ်သို့ မသန့်စင်သောရေအဖြစ်ဖြင့် တစ်ဖန်ပြန်၍၀င်ရောက်ကုန်၏။
အယူဝါဒတို့ ဘာသာတရားနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အတွေးတို့ဆိုတာ မူလပကတိကတော့ သူအကြောင်းအရာနဲ့သူ သန့်သန့်လေးပါ။
နောက်နှစ်ပေါင်းများစွာကြာတဲ့အခါမှာ ပြန်လည်တင်ပြသူရဲ့အာဘော်တွေပါတော့ မူလ ပကတိအတိုင်းမရှိတော့ အခုအချိန်မှာ ဘယ်မူကမှန်တယ် ဆိုတာပြောဘို့ခပ်ခက်ခက်ပါ။
စာပေ၊အက္ခရာရေးသားမှုပေါ်နေပြီးတဲ့ ခရစ်တော်ပွင့်တဲ့ခေတ်..လွန်ခဲ့တဲ့နှစ် ၂၀၁၀ကတောင်.. သမ္မာကျမ်းစာတွေဟာ ..မတူမညီ..အဓိပ္ပါယ်တွေခြားနားလွန်းလို့ .. အင်ပါယာတပါးက ..ဖြုတ်ထုတ်သတ်လုပ်ပြီး …ဆွဲညှိခဲ့ရပါတယ်..။
ကျုပ်ကိုယ်ပိုင်အမြင်ကတော့ ..တရုတ်တွေဟာ မှတ်တမ်းမှတ်ရာ သေသေချာချာထားတတ်တာမို့ .. အိန္ဒိယက..ပိဋကတ်သုံးပုံပင့်သွားပြီးတဲ့.. နောက်ပိုင်းကနေ..အခုခေတ်အထိ..ကြားမှာ..မူရင်းကနေ ..သိပ်ပြီးချွတ်ချော်သွားမယ်မထင်မိပါ..။
ထေရ၀ါဒကတော့ .. အိန္ဒိယကနေ..လွှင့်ပါးခဲ့ရလောက်အောင်ကို ..အဆင့်ဆင့်သော စစ်ပွဲတွေ.. ဖြုတ်ထုတ်သတ်တွေကြားထဲက..ရုံးကန်လာရတာမို့ .. မူရင်းထက်.. ထေရီထေရာကြီးတွေရဲ့အာဘော်တွေ သိသိသာသာပါမယ်ထင်မိပါတယ်..။
ဟုတ်ပြီ မှန်ပြီ အတည်မယူရတဲ့ကိစ္စက တရားအားထုတ်မှုမှာ သုံးတဲ့စကားလုံးပါ … ကိုယ်တိုင်အားထုတ်ပြီး ကိုယ်တိုင်ခန္ဓာနဲ့သိမှ ယုံကြည်ရမယ်လို့ဆိုလိုတာ … အမှန်တကယ် တရားရပြီဆိုရင် ယုံမှားသံသယလုံးဝမရှိတော့ပါဘူး … တခြားမည်သည့်ဘာသာရေးကိုမှ မည်သို့အကြောင်းကြောင့်မှ စိတ်နဲ့တောင်မယိုင်တော့ဘူး … သရဏဂုံတည်ပြီးသားဖြစ်သွားပါတယ် …
တခြားသာသာရေးတွေကိုပါလေ့လာတယ်ဆိုတာက ဘာဘာသာကို ကိုးကွယ်ရမှန်းမသိဘဲ ဟိုဟာကောင်းနိုး ဒီဟာကောင်းနိုးနဲ့ ယောင်ဝါးဝါးဖြစ်နေသူတွေရယ် …. စာပေတစ်ခုအနေနဲ့ ပညာရပ်တစ်ခုအနေနဲ့ မဖြစ်မနေလေ့လာရမယ့်သူတွေရယ်အတွက်သာ ဖြစ်ပါတယ် …
(ဘုရားဟောခဲ့တာကို အပြည့်နားလည်ဖို့ဆိုတာ အဓိသီလ၊ အဓိသမာဓိ၊ အဓိပညာ သုံးပါးစလုံးပြည့်စုံမှ ရမယ်ထင်ပါသည်။ )
ဒါပေမယ့် တစ်ခါတစ်လေ ဘုန်းကြီးတစ္ဆေလိုလူတွေ နားလည်ပေမယ့် မကျင့်ကြံနိုင်ကြခြင်းကို စကားနည်းနည်းများပေးကြည့်စေခြင်ပါသည်။
ဟုတ်ကဲ့ ရွာသူရွာသားများ ခင်ဗျား
ကိုအောင်ပုက ပြောခိုင်းပါသည်။ ဘုန်းကြီးတွေက သရဲတွေတဲ့။ လူတွေနားလည်အောင် မကျင့်လို့ဖြစ်တာတဲ့၊ ပြီးတော့ သူတို့စကားလည်း လျော့ပြောသင့်တယ်တဲ့။
သူပြောခိုင်းတာကို ကျနော်နားလည်သလောက် ပြန်ရေးပြတာနော်။ ရှင်းချင်ရင် သူ့အီမေးလ်ကို ကိုယ်တိုင်ဆက်သွယ်ကြပါ။
ဘာမှ မဟုတ်ဘူး.. ကျန်းမာရေး ကောင်းအောင် ဘုရားရှေ့မှာ ဒိုက်ထိုးချင်လို့..
ထိုင်ပြီး ရှီခိုးရတာ.. အကြောအချဉ်တွေ တောင့်တင်းနေလို့.. အကြောလျော့အောင် ဒိုက်ထိုးချင်နေတာ။ သဘောပေါက်ပြီ.. ကိုယ်ကြိုက်ရင် ကိုယ်လုပ်.. ကြဟေ့..
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ပရိယတ္တိ(သင်ယူခြင်း)၊ပဋိပတ္တိ(လက်တွေ့ ကျင့်ကြံခြင်း)၊ပဋိဝေဓ(ထိုးထွင်းသိမြင်ခြင်း)အတွက် အာမခံနိုင်သောအထောက်အထားများစွာကျန်ရှိနေပါသေးတယ်။ယုံကြည်
ကျင့်ကြံ်သူများအတွက် အကာလိကော-အခါမလင့် အကျိုးပေးတယ်။-လို့ ခံယူထားပါတယ်။
ခန္ဓာရလာတယ် ဆိုတာ ဒုက္ခ ရလာတာလို့ ဘုရားက ဆိုတယ်။
ဒုက္ခ ( တခုခုကို အောင့်အီး သည်းခံရတာ.. ပြုံးပြုံးကြီး ခံရတာကို မဟုတ်.. မခံမရက်နိုင် ဖြစ်တာကို သည်းခံရတာ)
မဂ္ဂင် (၈)ပါးဆိုတဲ့ အကျင့်မြတ်နဲ့ ကျင့်မှ ဒုက္ခဆိုတာ ကြီး ကင်းငြိမ်းနိုင်မယ်။
လူတွေမှာ တနေ့တနေ့.. ဟိုဟာအတွက် ပူရ ဒီဟာအတွက် ပူရ.. မရှိတဲ့ လူက မရှိလို့ ပူရ ရှိတဲ့ လူက ရှိတာ ကုန်မှာ ယုတ်လျော့မှာ အတွက် ပူရ အမျိုးမျိုးသော အကြောင်း တရားတွေ နဲ့ ပူလောင် ရတာ (သောက)
သာမာန် သောက က ရင်ဘတ်ဖိပြီး ပူနေရတာ.. ပဋိဒေ၀ ဆိုတာကတော့.. ရင်ထဲမှာ အပူတွေ မဆန့်နိုင်လွန်းလို့.. အပြင်ကို မျက်ရည်တွေ အဖြစ် ယိုစီးကျတာလာ..
ငါလုပ်နိုင်ပါလား ဆိုတဲ့ အတွေးနဲ့ ပီတိ ကတော့ (မာန).. ငါ ဖြစ်နိုင်ပါ့မလား ဆိုတာလည်း (မာန)ဘဲ..
လူတွေ ဖြစ်လာကြတာ.. သောက အပူတွေ ဖိစီးပြီး ပူလောင် နေကြတာကို ခံစားနေကြရပြီး ဒုက္ခတွေ ကို မာန ဆိုတဲ့ အတွေးတွေ မထားဘဲ မဂ္ဂင် (၈)ပါး ဆိုတဲ့ အကျင့်မြတ်နဲ့ ငြိမ်းနိုင်မှ ငြိမ်းကြမှာပါ။
မဂ္ဂင် (၈)ပါး ဆိုတာကတော့ စိတ်ကို ဖြူစင်အောင် ပြုလုပ်ခိုင်းတာပါဘဲ..
စိတ်ဆိုတာ အဖြူ ရောင်လို့ သဘော ထားမယ် ဆိုရင်.. သောက အစိမ်း ဒေါသ အနီ မောဟ အမဲ ဒုက္ခ အ၀ါ အဲဒီလို အရောင်တွေ ခွဲမှတ်လိုက်ရင်.. အဖြူရောင် စိတ်အပေါ် သောက ဖြစ်လို့ စိမ်းသွားလိုက်. ဒေါသ ဖြစ်လို့ နီသွားလိုက်.. အဲဒီလို အရောင်မျိုးတွေ ဟို ဟာရော ဒီဟာရောနဲ့ မသိချင်း ဆိုတဲ့ မောဟ ဖြစ်ပြီး စိတ်က မဲ သွားကော.. ဒီတော့.. ဘာကိုဘဲ လေ့လာ လေ့လာ.. ဘာတွေ ကောင်းတယ် လို့ ဘဲ ဆိုဆို.. အဟုတ် အမှန် ခွဲခြား စမ်းစစ်နိုင်အောင် စိတ်ကို ဖြူအောင် အရင်လုပ်ပြီးမှ.. ဘယ်ဟာ မှန်သလဲ မှားသလဲ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ သုံးသပ်ပါ။
တရားအကြောင်းကြီးဘဲ ရေးရတာ.. လက်တောင် ညောင်းလာပြီ။ အသိတွေကတော့ ဘယ်သူတွေ တိုးမတိုးတော့ မသိဘူး.. ပြောရတဲ့ လူတော့ စိတ်တွေ မောလာပြီ။… အော်.. ဒါလည်း သောက နဲ့ မာန..
ဒီပိုစ့်နဲ့ မန်းထားတာတွေဖတ်ရတာ ကြိုးတန်းပေါ်လမ်းလျှောက်ရသလိုပဲ
ဆူးနဲ့ဝေက မဟာယာနဖက်ကို စိတ်ယိုင်နေပုံရတယ်။ သူ့တို့ကို တိဘက်ဖြစ်ဖြစ် ဂျပန်ပြည်က မဟာယာနသင်တန်းကျောင်း တခုခုကို ပို့ပြီးလေ့လာခိုင်းရရင် မကောင်းဘူးလား။ ခရီးစရိတ်နဲ့ ဗီဇာကြေး ကိုသူတို့ဖာသာသူတို့ ရှာပါလိမ့်မယ်။ ကျောင်းလခ၊ နေစရိတ်မပေးရတဲ့ မဟာယာန ဘုန်းကြီးကျောင်းတွေရှိပါတယ်။ စားစရိတ်ကိုတော့ ရှစ်ပါးသီလ ယူမယ်ဆိုရင် သိပ်ကုန်မယ်မထင်ပါ။
ဦးကြောင်ကြီးလိုအနစ်နာခံမယ့်စေတနာရှင်နဲ့တွေ့ ရတော့ ကျနော်တောင်ယိုင်ချင်ချင်ဖြစ်လာတယ် ~~:P
ခ၇စ်တော်မပေါ်မှီနှစ်(၅၀၀)၀န်းကျင်ကဂင်္ဂါမြစ်နဘေးမှာဒုက္ခ၇ဲ့အေးငြိမ်း၇ာကို၇စေနိုင်တဲ့နည်းနာတွေကို၇ှာကြတဲ့ပညာ၇ှင်များထွန်းကားခဲ့ပါတယ်။ ဘယ်သူမှတ၇ားနည်းအစစ်ကိုမ၇ခဲ့ပါဘူး။ လေးသင်္ချေနဲ့ကမ္ဘာတစ်သိန်းဘ၀စုံကိုဖြတ်သန်းခဲ့၇တဲ့သိဒ္ဓထ္ထဆိုသူကတောင်လက်၇ှိဘ၀မှာဒုက္ခ၇ဲ့ငြိမ်း၇ာကိုချက်ချင်း၇ှာမတွေ့ပါဘူး။ တကယ်တွေ့တော့သူ့အနားမှာပညာကိုပြန်ဖြန့်ပေးဝေပေး၇မဲ့သူတဦးတောင်မှမ၇ှိပါဘူး။ ၇ှိပြန်တော့လိုမယုံသလိုယုံသလိုဖြစ်နေကြလို့ (ပဉ္စ၀ဂ္ဂီ ကိုဆိုလိုတာပါ) “လောကမှာဆင်း၇ဲခြင်းတို့ကုန်၇ာချုတ်၇ာတ၇ား၇ကြောင်းအ၇င်ကငါပြောဘူးလို့လား၊ ခုငါတွေ့ပြီ”ဆိုမှ လက်ခံကြတယ်။
ယုံမှတ်မှားခြင်းဟာဒိတ္ထိလမ်းကိုသွေဖည်စေတဲ့အကြောင်းတွေပါ။ ဟိုလိုလိုဒီလိုလိုသိသလိုမသိသလိုဖြစ်တာထက်၊ လုံးဝမသိတာကပိုကောင်းပါတယ်။ “ယုံမှတ်မှားခြင်း”ဟာကြောက်စ၇ာအကောင်းဆုံးဒိတ္ထိတ၇ားပါ။ ဘယ်လောက်ကြောက်ကစ၇ာကောင်းလဲဆိုတော့သံသ၇ာမှာလည်မှန်းမသိထပ်လည်တတ်ပါတယ်။
“ဧဟိပသိကော” လို့ဆိုထားပါတယ်။ သူများပြောစကားနဲ့ယုံမှတ်ခြင်းမပြုဘို့ ဂေါတမက ညွှန်ပြပါတယ်။ ကိုယ်တိုင်လေ့လာကြည့်ပါ။ ကျင့်ကြံကြည့်ပါ။
ဆ၇ာပါ၇ဂူ ၇ဲ့စာပေများကမောင်မိုးညို၇ဲ့ ဗုဒ္ဓ၀ါဒကိုစူးစမ်းလိုတဲ့ဆန္ဒကိုနှိုးးဆွပေးခဲ့ပါတယ်။
မိ၇ိုးဖလာဝါဒနဲ့ဘဲမတင်းတိမ်ပါနဲ့။ “အင်္ဂဂုတ္တ၇နိကာယ်” ဟာ လေ့လာသင့်တဲ့ခ၇ီးအစလို့အကြံပြုပါ၇စေ…။
“သီတဂူဆရာတော်ကြီး ပြောတဲ့ စကားတခွန်းကို မှတ်သားမိဘူးတယ်၊ ဘယ်ဘာသာကို မဆို လေ့လာထားပါ၊ သူတို့နဲ့ စကားပြောလို့ အနိုင်လိုချင်၇င် သူ့တို့ ဘာသာရဲ့ အားနည်းချက်ကို သိနေတော့ ပြောဆိုရတာ ( နောက်ဆုံး ငြင်းခုံရင်တောင် ကိုယ်က အနိုင်ရမယ် ) သိပ်လွယ်တယ် တဲ့။”
အဲဒါ နည်းနည်း ဘ၀င်မကျလို့ ပြောလိုက်အုံးမယ်နော်..
ဘယ်ဘာသာကို မဆိုလေ့လာထား ငြင်းခုံရင် နိုင်ဖို့ဆိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်က နည်းနည်း မှားနေလားလို့။ ဘယ်ဘာသာကို မဆိုလေ့လာသင့်တယ် ဒါမှ မိမိဟာ သူတပါး ဘာသာကို လေးစားသလို မိမိဘာသာမှာ မရှိတဲ့ မိမိမသိတဲ့ အမြင် အယူအဆတွေကို သိရှိနိုင်မယ်။ ကျွန်တော့အထင်တော့ ဘယ်ဘာသာမှ ပြီးပြည့်စုံပြီး အစွမ်းကုန် perfect ဖြစ်နေတယ်လို့ မထင်ဘူး။ အဲတော့ ကောင်းတဲ့ အချက်တွေ့ရင်ယူမယ်၊ မိမိလက်မခံနိုင်တာတွေ့ရင် ပယ်မယ်။ ဒါဟာ ဘာသာတရားတွေကို လေ့လာတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်လို့ ထင်တာဘဲ။ ငြင်းရင် နိုင်ဖို့ဆိုတာကြီးက သိပ်ဘ၀င်မကျ သလိုဘဲ။
အမှားပါရင် ခွင့်လွှတ်ပါနော်။ ကျွန်တော် မရင့်ကျက်လို့ ဖြစ်မှာပါ။ … လူတိုင်း မတူ ကွဲပြားခွင့် ရှိတယ်လို့ ယုံကြည်မိလို့ပါ။